आजको जेठ ०१ गते शनिबार , कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् !राशिफल | Seto Khabar
२०७८ अषाढ १०, बिहिबार
पछिल्लाे २४ घण्टामा काठमाडाैं उपत्यकामा काेराेनाका कति संक्रमित थपिए ?
कोरोनाभाइरसका विरामीमध्ये ७३६ सघन र २०७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै, थप २४ जनाको मृत्यु
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त, लोकसेवाकाे अध्यक्षमा झापाका रेग्मी (नामावलीसहित)
डोटीमा असार २० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
विसं २०७८ साल जेठ ०१ गते शनिबार । इस्वी सन् २०२१ मे १५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । वैशाख शुक्लपक्ष । तिथि–तृतीया, ०५ बजेर ३४ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । नक्षत्र– मृगशिरा, ०६ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त आद्र्रा । योग–धृती, २४ बजेर ३२ मिनेट उप्रान्त शूल । करण– गर, ०५ बजेर ३४ मिनेट उप्रान्त वणिज, १८ बजेर १६ मिनेट उप्रान्त वालव । आनन्दादिमा–वज्र योग । चन्द्रराशि–मिथुन ।काठमाडौँमा सूर्याेदय बिहान ०५ बजेर १७ मिनेटमा, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ४५ मिनेटमा । दिनमान ३३ घडी ३९ पला । .पु. मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रारम्भ ।
मुद्दा मामिला तथा अदालतबाट हुने फैसला तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरूलार्ई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइमा मिहिनेत गरी राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नेछन् । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
बृष (इ, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो)
आफन्त तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ । बोलीको प्रभाव बढ्ने तथा महत्त्वपूर्ण काम आज नै फत्ते गर्नु उचित हुनेछ । पढाइ लेखाइमा राम्रै प्रगति भएर जानेछ । औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । मायाप्रेममा विश्वासको वातावरण बढ्नेछ ।
पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरूलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ । मायाप्रेममा सामीप्यता बढेर जानेछ भने घरपरिवार तथा आफन्तबीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना भनाइ वा लेख जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
अरूको काममा समय बित्ने तथा अरूको काम गर्न खोज्दा आफ्नो काम थाँती रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गर्दा पनि आम्दानी थोरै हुनेछ । विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । सामान्य आँखासम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग पाइनेछ । माया प्रेममा सामीप्यता बढेर जानेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । विद्यामा तपाईंले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन ।
पढाइ लेखाइमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा महत्त्वपूर्र्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहने हुनाले पद पाप्तिको गतिलो योग रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । समयले साथ दिने हुनाले अन्य बौद्धिक क्रियाकलापमा पनी ध्यान जानेछ ।
सामाजिक काम गर्न सकिने हुनाले मान मर्यादामा वृद्धि हुनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईं अरूभन्दा अब्बल हुनुहुनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक काम समयमा सम्पादन गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू)
आउने ठाउँबाट रुपैयाँ पैसा नआउनाले बनाएका योजना थाती हुनेछन् । व्यापारमा उधारो लगेर नतिर्नेहरू हाबी हुनेछन् भने आम्दानी नहुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । माया प्रेममा तिक्तता आउने तथा दाम्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नाले घरमा समस्या उत्पन्न हुनेछ । समय र परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र कुनै काम गर्नुहोला, काम बिग्रन सक्छ । तर पनि बैङ्क तथा सेयर बजारको लगानी भने फस्टाएर जानेछ ।
औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दी आउनेछ । पढाइलेखाइमा सफलता प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा एकअर्काको भावना बुझ्न सकिने हुँदा एउटै बाटो हिँड्न सकिनेछ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
सत्रु तथा प्रतिस्पर्धीलार्ई हरेक क्षेत्रमा परास्त गर्दै भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । मायाप्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट तपाईंको काममा भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)
सेयर बजार तथा चिठ्ठाको व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने खाद्यान्न तथा मेडिकल व्यावसायमा लगानी गरी धनसम्पत्ति कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने आत्मीय मित्रको साथ रहने हुनाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानबाट तपाईंको काममा सहयोग हुने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । सन्तान तथा छोराछोरीको सहयोगले राम्रा तथा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकिनेछ ।
राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवीहरूले जनताको काम गर्न सक्दा मात्र मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । खोज तथा अनुसन्धानमा उपलब्धिमूलक नतिजा नआए पनि आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुनेछ । आमा सरहका मानिससँग टाढिएर देश परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी मनग्य लाभ लिन सकिनेछ ।
चुरेमा बादल देखिनासाथ राति बाढी आउने डरले कोही सुत्न सक्दैनन्
तल्लो जातको भन्दै कोठा संचारकर्मी रुपालाई कोठा नदिने घरबेटी पक्राउ
बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य यस्ताे छ
स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अन्तिम वर्षको बजेट आज
एक हप्तामा ३२ सय रुपैयाँले सस्तियो सुन